एमालेको गणितदेखि राजपाको नकुदेको साइकलसम्म ! – Everest Dainik – News from Nepal
एमालेको गणितदेखि राजपाको नकुदेको साइकलसम्म !
मधेसका कांग्रेसी कमाण्ड कै गाउँ ढल्यो, कहाँ गए साझा विवकेशील ?
काठमाडौं, ६ असोज– स्थानीय तहको तेस्रो चरणको निर्वाचन अन्तर्गत सोमबार भएको मतदानको अहिले करिब आधा स्थानीय तहको मतपरिणम सार्वजनिक भएको छ । प्रदेश नम्बर दुईका आठ जिल्लामा १३६ स्थानीय तह छन् ।
पछिल्लो मतगणनामा नेपाली कांग्रेसले जीतका अग्रता कायम गरेको छ भने गणना भइरहेको स्थानीय तहमा पनि उसको अग्रता कायम रहेका कारण दुई नम्बर प्रदेशमा कांग्रेस ठूलो दल बन्नेमा शंका बाँकी छैन । अव माओवादी केन्द्र, समाजवादी फोरम र राजपामा को दोस्रो बन्ने भन्ने गणनाले देखाउने छ ।
अहिले सम्मको अवस्थामा दोस्रो स्थानमा माओवादी केन्द्र रहेको छ जसको तेस्रो स्थानमा रहेको समाजवादी फोरम भन्दा तीन स्थान बढी छ । नेकपा एमाले पाँचौ स्थानमा छ र उसले यही हैसियतमा दुई नम्बरको मतगणना सक्ने छाटकाट देखाएको छ ।
असोज दुई गते निर्वाचन सकिएसँगै शुरु भएको मतगणना र त्यसको नतिजाका क्रममा देखिएका केही रोचक पक्षबारे हामी यहाँ उल्लेख गर्दै छौं ।
चितवनको भरतपुर महानगरपालिकामा माओवादी केन्द्रका प्रतिनिधिले मतपत्र च्यातेपछि लामोसमय त्यहाँको मतगणना रोकियो । त्यसपछि उक्त क्षेत्रमा पुन चुनाव भयो । त्यसको आतंकले तराईको मतगणना जोगिन सकेन जसका कारण दुई नम्बर प्रदेशको एकमात्र महानगरपालिका वीरगञ्जमा मतगणना तार जाली बेरिएको स्थानमा भएको थियो । जसको तस्वीर सामाजिक सञ्जालहरुमा निकै चर्चामा रहेको थियो ।
एमालेको विग्रिएको गणित
मतगणनाको अपडेट सार्वजनिक भइरहदा पहिलो र दोस्रो चरणको चुनावमा पहिलो पार्टी बनेको नेकपा एमालेको कम सीट संख्याका विषयमा मानिसहरुले चासो व्यक्त गरिरहेका छन् । तराईमा ७० प्रतिशत जित्ने एमाले नेताहरुका भाषण र ट्वीट बाहिर आइरहेका छन् । मतगणनामा एमाले पाँचौ स्थानमा छ । जबकी उसले पहिलो हुने दाबी गरेको थियो ।
नेता नेपाल कै जिल्लामा नील
एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालको निर्वाचन क्षेत्र रौतहटका कुनै पनि स्थानीय तहमा एमालेले जीत निकाल्न नसकेपछि नेता नेपाललाई सामाजिक सञ्जालमा खिसी टिउरी गर्नेको संख्या पनि कम छैन ।
दुई नम्बर प्रदेशको चुनावमा ७० प्रतिशत जित्ने दाबी गर्ने एमालेका नेताहरु नजिता आफ्नो पक्षमा नआएसँगै निर्वाचनमा सत्ता पक्षले पैसा खर्च गरेको आरोप लगाउन पछि परेका छैनन् ।
राजमार्ग मै कमजोर
एमालेले दुई नम्बर प्रदेशलाई आफ्नो मुख्य मतको आधारको रुपमा लिएको थियो । राजमार्ग छेउका स्थानीय तहमा कव्जा नै जमाउने र तल्लो क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धामा आउने एमालेको आकलन थियो । तर, वाराको निजगढ जसलाई एमालेको गढको रुपमा लिइने गरिएको थियो त्यहाँ नेपाली कांग्रेसले विजय उत्सव मनाएको छ । एमाले नेताले माओवादीसँग मिलेको कारण कांग्रेसले जितेको आत्मसन्तुष्टि जनाउनु बाहेक अपसोच गर्ने ठाउँ बाँकी छैन ।
राजपाको साइकल कुदेन
दुई चरणको स्थानीय तहको चुनावमा भाग नलिएको तराईका ६ दल मिलेर बनेको राजपाले तेस्रो चरणको चुनावलाई निकै महत्व र आफ्नो शाखको रुपमा लिएको थियो । तर चुनावी मतपरिणामले भने त्यस्तो देखाएको छैन ।
पहिलो बन्नका लागि नेपाली कांग्रेससँग प्रतिस्पर्धा हुने अनुमानका विपरित उसको प्रतिस्पर्धा चौथो बन्नका लागि उ आफैले मधेसविरोधी भनेको एमालेसँग भइरहेको छ ।
एमालेलाई मधेस विरोधी र आफू मधेसको वास्तविक शक्ति भन्दै आएको राजपालाई मतदातले भने शक्तिहीन बनाइदिएका छन् ।
चुनाव चिह्न साइकल लिएर चुनावमा भीडेको राजपाका नेताले चुनावी प्रचारका लागि समय नपुगेका कारण आफ्नो उपस्थिति कमजोर भएको बताउन थालेका छन् ।
मधेसका कांग्रेसी कमाण्ड कै गाउँ ढल्यो
नेपाली कांग्रेस दुई चरणको मतपरिणामबाट पछि परेको अवस्थालाई अन्त्य गर्न तराईमा धेरै जित्ने योजनामा थियो ।
स्थानीय तहको चुनावबाट पहिलो पार्टी बन्ने महत्वाकांक्षा लिएर खटिएको कांग्रेसका प्रभावशाली नेता विमलेन्द्र निधिले तराईमा १०० स्थानीय तहभन्दा बढी जित्ने दाबी गरे र त्यही अनुरुप तराईमा खटिए । तर, उनको गाउँ रहेको नगराइन नगरपालिका वडा नम्बर ७ मा उनलाई एमालेका उम्मेदवारले भट्का दिए । एमालेका उम्मेदवार रामदुलार मुखिया नगराइन नगरपालिका वडा नम्बर ७ का वडा अध्यक्ष निर्वाचित भए । आफ्नै वडा जिताउन नसकेको भन्दै निधिको नेपाली कांग्रेस कै कार्यकर्ताले आलोचना गरे ।
ससुरा बुहारी मेयर उपमेयर
रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिकामा ससुरा बुहारी मेयर र उपमेयर जितेपछि चर्चा भएको छ ।
नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट उम्मेदवार रामचन्द्र चौधरीले मेयरमा जित्दा उपमेयर एमालेकी रामरती चौधरी भएकी छिन् उनीहरु नाताले ससुरा बुहारी हुन् ।
कांग्रेसको १०० सीट !
तेस्रो तहको स्थानीय तहको निर्वाचन अघि अधिकांश कांग्रेसका नेताले दुई नम्बर प्रदेशमा आफ्नो दलले १०० भन्दा बढी स्थानीय तहमा जित्ने दाबी गरे । प्रधानमन्त्री समेत रहेका पार्टी अध्यक्ष शेरबहादुर देउवा देखी तराईको चुनाव प्रचार मै नपुगेका नेताले समेत १०० भन्दा बढी सीट जित्ने दाबी गर्थे तर वास्तविकतामा भने त्यस्तो देखिएको छैन । पार्टीलाई पहिलो बनाउन क्याल्कुलेटर मात्र थिच्ने नेताको रुपमा रहे ।
मन्त्री पत्नी मेयर
माओवादी केन्द्रका नेता एवं शहरी विकास मन्त्री प्रभु शाही पत्नी मेयरमा विजयी भएकी छिन् । उनकी पत्नीले रौतहटको मौलापुर गाउपालिकाबाट जितिन् । रिना कुमारी शाह, उनी दुई नम्बर प्रदेशकी पहिली मेयर हुन् ।
२२ वर्षे अचर्नाको उपमेयर यात्रा
पर्साको पर्सागढी नगरपालिकामा २२ वर्ष नपुग्दै अर्चना चौधरी उपमेयरमा निर्वाचित भएकी छिन् । २०५२ साल पुस ५ गते जन्मिएकी अर्चना उपमेयरमा निर्वाचित हुँदा २१ वर्ष ९ महिना एक दिनकी पुगिन् ।
नेपाली कांग्रेसबाट चुनाव लडेकी उनी निकटतम प्रतिद्वन्द्वीलाई ९ सय १९ मतले पछि पार्दै पाँच वर्षको लागि उपमेयरको कुर्सीमा बस्ने भएकी हुन् ।
जनता दलको चमत्कार
तराईका आठ जिल्लामा विभिन्न छ दल मतगणनामा देखिएका छन् । तर कमै ले मात्र नाम सुनेको दलले समेत एक स्थानीय तहमा जितेको छ ।
नेपाली जनता दलले स्थानीय तहमा विजय हाँसिल गर्नेमा खासै कसैले पनि सोचाई राखेका थिएनन् । तर नसोचेकै विषय भईदियो । पर्साको कालीकामाई गाउँपालिकाको अध्यक्षमा सोही पार्टीका नथुनी कुशबाह २हजार १ सय ५१ मतका साथ विजयी भए । उनका निकटतम प्रतिस्पर्धी ललसा देवी कलवारले १९९८ मत मात्रै ल्याए । उनलाई १ सय ५३ मतले कुशवाहले पराजीत गरेका हुन् ।
कहाँ गए साझा विवकेशील ?
काठमाडौं महानगरपालिकामा प्रमुख राजनीतिक दललाई टक्कर दिएकी विवेकशीलकी रञ्जु दर्शना तेस्रो चरणको चुनाव प्रचारका लागि पुगेकी थिइन् । बाराको जीतपुर सिमरा उपमहानगरपालिका साझा विवकशीलले उम्मेदवार उठाएका थिए । तर, उनको भोट तीन अंकमा पनि पुग्न सकेन ।
आफूलाई बैकल्पिक शक्तिको रुपमा प्रचार गर्दै आएकी साझा विवेकशीलको तराईको उपस्थितिलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा चर्चा भएको छ । धेरैले काठमाडौं पार्टी भन्दै उनीहरुको आलोचना गरेका छन् । -लाेकान्तरबाट
ट्याग्स: rajapa ra uml
टेष्ट क्रिकेटमा रोहित शर्माको पहिलो दोहोरो शतक
रेल्वे स्टेसनमा गीत गाएर चर्चामा आएकी रानू के गर्दै छिन् आजभोलि ?
नेपालसँग क्रिकेट खेल्न विश्वकै सबैभन्दा पुरानो एमसीसी नेपाल आउँदै
धादिङमा भेटिएको बम सेनाद्वारा निस्कृय
असंलग्न राष्ट्रहरूको सम्मेलनमा भाग लिन प्रधानमन्त्री ओली कात्तिक ८ मा बाकु जाने
सुनको मूल्य घट्यो, आइतबार कतिमा हुँदैछ कारोबार?
महराले दिएनन् बयान, फेरि आइतबार म्याद थपिँदै
भोजपुरमा हतियार प्रहार: एक महिलाको हत्या, एक किशोरी गम्भीर घाइते